Sida loo Beddelaan AVI in MPEG ee Mac / Windows (Windows 8 ka mid ah)
Qaab file video AVI hidde u yimaado tayo fiican, si kastaba ha ahaatee, waxa uu sidoo kale ku kaydsan size weyn file in laga yaabo in aan la taageeray by inta badan qalabka la qaadi karo. Haddii aad qabtid qaar ka mid ah files AVI video in aad jeclaan doonaa si Radidiyaha on kombuyuutarrada gacanta, waxaad u baahan doontaa in iyaga loogu badalo in ay qaab file MPEG ah ka hor.
Haddii ay sidaa tahay, waxaad u baahan kartaa AVI ah in Converter MPEG si uu shuqulka dhabta ah. Maqaalkani waxa uu ku tusi doona sida ay u badalaan file AVI ah in MPEG labada Windows (Windows 10 ka mid ah) iyo Mac OS X (Mountain Libaaxa ka mid ah), si fudud oo dhaqso.
Qeybta 1: Best AVI in MPEG Video Converter
Qeybta 2: AVI Free in MPEG Converter
Qeybta 3: AVI Online in MPEG Converter
Qeybta 4: Extended Knowlege u AVI iyo MPEG
Qeybta 1: Best AVI in MPEG Video Converter for Windows / Mac (Windows 8 & Mavericks ka mid ah)
Taageer qaabab talooyin kala duwan ee diinta.
Falanqeynta Live u itusi iyo isbedel.
Samee uruuriyaa DVD shakhsi.
Goobidda iyo geliso subtitles in aad videos.
Sida loo badalo AVI ah in MPEG
Tutorial hoose ayaa waxaa loogu talagalay dadka isticmaala Windows ku saabsan sida ay u bedeli karaan AVI ah in MPEG. Haddii aad tahay user Mac ah, akhri tutorial ku saabsan Sida loo Beddelaan AVI in MPEG ee Mac .
1. Import video files gal interface
Burcad Video Converter Ultimate ah. Riix dar Faylal ay kasoo dajiyaan video AVI faylasha in aad u baahan tahay si loogu badalo ama si fudud u jiidi-iyo-hoos u iyaga si toos ah barnaamijka. On top of in, diinta Dufcaddii ayaa sidoo kale taageeray. Sidaa awgeed, waxaad ku dari kartaa dhowr files hal mar.
2. Dooro sida qaab wax soo saarka aad MPEG
Ka dooro MPEG Qaabka Output hoos-hoos menu 's. Haddii aad jeceshahay inaad daawato videos on kombuyuutarrada gacanta, waxaad noqon doonaa faraxsanahay in ay ogaadaan in software ayaa sidoo kale taageertaa diinta si toos ah qaab wax soo saarka in uu talinayaa in loo maqli karo ee aad doorato qalabka. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay guji Device category in ay doorasho.
3. Ku bilow AVI in ay diinta ka MPEG
Mar walba waxaa la dhigay, sii soco ilaa Beddelaan. AVI ayaa si Converter MPEG markaas ayaa dhameystiri doona beddelaad si toos ah. Waxa kale oo aad la oggol yahay si ay u joojiyaan ama yara qaab beddelidda inta ay socoto. Fadlan daawado tutorial video hoose si fiican loo fahmo sida ay u shaqayso.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo AVI in ay MPEG Video Converter for Windows
# 1. Free Video Converter: Wondershare Free AVI in MPEG Converter
Tani waa AVI gebi FREE in MPEG Converter aad u. Marka laga reebo diinta file ee, sidoo kale waxa aad isticmaali karto si aad xaalkaa iyo soo bixi videos ka goobaha video qaybsiga loo jecel yahay.
1. Taageer diinta kaliya ee video caadi files.
2. Xawaaraha Standard ee diinta.
3. Haddii aan DVD abuure ama feature gubashada.
Qeybta 4: Aqoonta Extended u AVI iyo MPEG Qaabka
AVI waa weel multimedia ay ku jiraan xogta audio iyo video labadaba. Waxa ay u ogolaataa audio-la-video loo maqli synchronous. Files AVI taageeraan badan audio geeyo iyo video MPEG (gaabinta ah u Motion Picture Khubarada Group) waa qaab weelka loo isticmaalaa in uu kaydiyo video iyo maqal ah labada dhinacba in ay ku yimaado heerarka kala duwan sida MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4 iyo wax ka badan ah.
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan AVI in MPEG ee Mac / Windows (Windows 10 ka mid ah)